Sekoly ambony etsy Ampefiloha : Mifangaro amin'ny mpivaro-toaka -
AccueilRaharaham-pirenenaSekoly ambony etsy Ampefiloha : Mifangaro amin’ny mpivaro-toaka
Maniry sahala amin’ny anana, hoy ny fomba fiteny, ny fanokafana oniversite tsy miankina na ireo ivon-toerana ambony (IST) eto Madagasikara. Tao anatin’ny taona maro dia niroborobo be ity sehatra iray ity. Mampalahelo anefa, fa dia maro no manaotaofoana ka ny ray aman-drenin’ny mpianatra tsy mahalala na inona na inona mihitsy no voafitaka.
Misy fepetra arahana anefa ny fananganana an’ireny, raha ny fanazavana, saingy mahagaga fa dia betsaka ny tsy manara-dalana avy hatrany raha vao jerena ivelany fotsiny. Ny Iserp etsy Ampefiloha, ohatra, no hoentina amintsika eto. Mbola maro kosa no hoentina eto.
“Rehefa hanorina oniversite dia tsy maintsy manatona ato amin’ny minisiteran’ ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika. Ato no misy antontan-taratasy rehetra mahakasika ny famoronana oniversite izay natao ho fenoina.Ny fahaiza-manaon’ireo mpampianatra, izay tokony hifanaraka amin’ny fampiofanana takiana sy manaraka ny fivoaran’ny vaninandro. Tsy azo atao ambanin-javatra ny fananana fotodrafitrasa ara-dalàna. Mameno io ny olona ary rehefa feno io dia misy ny kaomisiona nasionaly misahana ny fanomezana fahazoan-dalana mandinika ny antontan-taratasy izay arahina fivoriana inefatra na intelo isan-taona. Ary ekena fa rehefa manaraka ny lalàna ny antontan-taratasy dia afaka misokatra. Aorian’izay, midina eny ifotony ny kaomisiona mijery raha mifanaraka amin’ilay tao amin’ny antotan-taratasy nofenoina izany. Eo amin’izay no hanomezana fankatoavana na tsia ny oniversite iray”, hoy ny talen’ny sekoly ambony miankina sy tsy miankina, Razafimahatratra Dieu Donné.
Raha araka izay fanambaran’ny tale Razafimahatratra izay tokoa no izy, tena mampiahiahy sy mampiteny ny moana ny fomba hanomezana ireny fahazoan-dalana ireny. Tsy mba nisy fijerena ifotony ve izany avy amin’ny tomponandraikitry ny Fampianarana Ambony raha ny momba an’ity Fampianarana Ambony Iserp etsy Ampefiloha amin’ny lalamby no resahina. Ity farany izay hita fa tena tsy manara-dalàna tanteraka raha eo amin’ny fotodrafitrasa. Raha ny tsikaritra mantsy dia eo ambonin’ny toerana fivarotan-toaka mihitsy no misy azy. Azo sary an-tsaina amin’izany fa mifanipaka amin’ny soa toavin’ny fampianarana izany. Ny toaka sy ny fampianarana dia mpifahavalo. Aiza ho aiza ny fandraisan’ny minisitera fepetra amin’izay fotoana izay satria ny ho avin’ny ankizy mihitsy no voatohitohina. Ny lanjan’ny diploma omen’ireo tsy manara-dalàna dia tsy hanan-danja mihitsy rehefa misehatra eo amin’ny asa ireo tanora, indrindra raha toa ka ho any ivelany ka haka ny « équivalence » eo anivon’ny minisiteran’ny Asa sy ny Lalàna sosialy. Tsara ho fantatra fa oniversite vitsy ihany no manana fankatoavana avy amin’ny minisiteran’ny Fampianarana ambony amin’izao, ka anjaran’ny ray aman-dreny mampiana-janaka amin’ireny oniversite tsy miankina ireny no manadihady tsara mba tsy ho voafitaka.